अरुका लागि प्रेरणा देवेन्द्र – Sajha Bisaunee
अरुका लागि प्रेरणा देवेन्द्र
थुप्रै पटक आत्महत्याको प्रयास गरे पनि बुवाको मुख हेरेर बाँच्ने साहस बोकेर नयाँ जीवन सुरु गरेका देवेन्द्र पाठक अहिले अरु धेरैका लागि प्रेरणाका स्रोत बनेका छन् ।
जसरी म समाजमा खुलेर अन्य दाजुभाइ तथा दिदी–बहिनीहरुको लागि वकालत गर्दै हिँडेको छु । त्यसरी नै सबै संक्रमितहरु खुल्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । म संक्रमित भएर पनि धेरै स्वस्थ छु । दिनभर अन्य व्यक्तिहरू जस्तै काम गर्छु । मलाई अन्य एचआईभी संक्रमित दाजुभाइ तथा दिदी–बहिनीहरुको लागि वकालत गर्न पाउँदा खुशी लाग्छ ।
वि.सं. २०६२ सालमा जब उनले अस्पतालको शैयामा एचआईभी संक्रमित भएको रिपोर्ट पाए, छाँगाबाट खसेजस्तै भयो । जीवन सकिएजस्तो लाग्यो । उनलाई बाँच्न पटक्कै मन थिएन । धेरै पटक उनी हातमा चक्कु बोकेर आत्महत्याको बाटो रोज्ने प्रयासमा समेत लागे । कहिले गुडिरहेको बसबाट त कहिले घरको छतबाट हाम फाल्न खोजे । तर जब–जब उनी यस्तो सोच्थे ठीक त्यहीबेला आँखामा वृद्ध बुवाको तस्बिर आइपुग्थ्यो । अनि पछि हट्थे ।
थुप्रै पटक आत्महत्याको प्रयास गरे पनि बुवाको मुख हेरेर बाँच्ने साहस बोकेर नयाँ जीवन सुरु गरेका देवेन्द्र पाठक अहिले अरु धेरैका लागि प्रेरणाका स्रोत बनेका छन् । धादिङ जिल्लामा वि.सं. २०३३ साल वैशाखमा जन्मिएका देवेन्द्र हाल नवकिरण प्लस सामुदायिक हेरचाह केन्द्र सुर्खेतको कार्यक्रम संयोजकको रूपमा काम गर्दै आएका छन् । सुरुको अवस्थामा आत्महत्याको बाटो रोजेका पाठक अहिले अभियन्ताको रूपमा काम गर्दै आएका छन् । उनका लागि एचआईभी रोग होइन । नियमित औषधि उपचार गरे पूरा आयु बाँच्न सकिने उनी बताउँछन् । एचआईभी संक्रमितहरूको पक्षमा काम गर्दै आएका पाठकले आफ्नो जीवनभोगाइका कथा हाम्रा सहकर्मी सीता वलीसँग यसरी साटे:
एसएलसी उत्तीर्ण भएपछि वकिल बन्ने सपना बोकेर पृथ्विनारायण क्याम्पस पोखरामा कानुन विषय पढ्न थालें । अध्ययन अघि बढ्दै थियो जीवनमा एउटा दुर्घटना भयो । वि.सं. २०६२ सालमा एचआईभी संक्रमण देखियो । सुरुको चरणमा त एकदमै अप्ठ्यारो भयो । बाँच्ने कुनै रहरै थिएन । आमा भर्खरै बित्नुभएको । रोग लुकाएरै मर्ने सोच बनाए पनि ६० वर्षीय वृद्ध बुवाको मुख हेरें । मलाई मर्न मन लागेन । विस्तारै मैले आफूलाई सम्हाल्दै नवकिरण प्लस काठमाडौंका अध्यक्ष राजीव काफ्ले सरसँग भेट्न गएँ । उहाँ आफै पनि एचआईभी संक्रमित हुनुहुन्थ्यो । उहाँको हौसला र प्रेरणाले मलाई बाँच्ने उर्जा दियो ।
कानुनमा स्नातक गर्दै गरेको मेरो बाटो मोडियो । सायद कानुनको पढाइ पूरा गरेको भए म वकिल बन्थेँ होला । तर यो क्षेत्रमा धेरै एचआईभी संक्रमितहरूको घाउमा मल्हम लगाउँदैछु । यो पनि वकालतको क्षेत्र हो । मैले पोखरामा बस्दा धादिङ–पोखरा सम्पर्क समितिमा रहेर काम गरें । जब म संक्रमित भएँ नवकिरण प्लसमा रहेर काम गर्दै आएको छु ।
रोगलाई लिएर समाजले घृणा गर्छ
आजको २१ औँ शताब्दीमा आएर पनि हाम्रो समाज रोगलाई लिएर व्यक्तिलाई घृणा गर्छ । त्यसमा पनि कर्णालीमा यो अवस्था अझ विकराल छ । करिब १५ वर्ष अगाडि म एचआईभी संक्रमित हुँदा पनि मेरो केही साथीभाइहरू र मेरा नातेदारहरू मसँग टाढा हुनुभयो । वास्तवमा एचआईभी रोग होइन । नियमित औषधि सेवन गरे पूरा आयु बाँच्न सकिन्छ ।
नेपाल सरकारका विभिन्न अस्पतालहरूमा समेत औषधि निःशुल्क रूपमा वितरण गरिएको छ । तर पनि समाजको डरले धेरै व्यक्तिहरू खुल्न सक्नुभएको छैन । मेरो जीवनमा खासै धेरै समस्या त भएन । मेरो परिवारले सुरुमा रोगबारे अनौठो व्यवहार देखाए पनि मलाई सहर्ष स्वीकार्नु भयो । तर धेरै संक्रमितहरू आज पनि परिवार तथा समाजलाई रोग लुकाई राख्नु भएको छ । कर्णालीको अवस्था हेर्ने हो भने करिब ६ सय जना संक्रमितहरू हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । जसमध्ये ८० प्रतिशत खुल्नुभएको छ भने २० प्रतिशत अझै लुकेरै उपचार गराइ रहनु भएको छ ।
एचआईभी संक्रमित खुल्नुपर्छ
पछिल्लो समय एचआईभी सामान्य भइसक्यो । अन्य दीर्घ रोग भन्दा यो रोग लागेका मानिसहरू स्वस्थ देखिन्छन् । नियमित आयु लम्बाउने औषधि सेवन गरेको खण्डमा पूरा आयु बाँच्न सकिन्छ । एचआईभी संक्रमितहरू खुलेर आउनु पर्छ । यसको लागि तीनै तहका सरकारले समेत बजेट विनियोजन गरी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नु जरुरी छ ।
नवकिरण प्लस जो एचआईभी संक्रमितहरूको पक्षमा वकालत गर्ने संस्था हो । जसले औषधि उपचार, हेरचाहदेखि पैरवीको समेत काम गर्दै आएको छ । हामीहरूले सेल्टरमा राखी संक्रमितहरूलाई उपचार गर्ने व्यवस्था समेत गर्दै आएका छौं । त्यसमा कर्णाली प्रदेश अस्पतालले समेत सहयोग गर्दै आएको छ ।
नवकिरण प्लस विशुद्ध रूपमा संक्रमितहरूकै नेतृत्वको संस्था हो । जसरी म समाजमा खुलेर अन्य दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको लागि वकालत गर्दै हिँडेको छु । त्यसरी नै सबै संक्रमितहरू खुल्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । म संक्रमित भएर पनि धेरै स्वस्थ छु । दिनभर अन्य व्यक्तिहरू जस्तै काम गर्छु । मलाई अन्य एचआईभी संक्रमित दाजु–भाइ तथा दिदी–बहिनीहरूको लागि वकालत गर्न पाउँदा खुशी लाग्छ । त्यो बेला दुर्घटना घट्यो भन्ने लाग्थ्यो तर आज गर्व लाग्छ । कि धेरैको घाउमा मल्हम लगाउन पाएको छु । धेरैको आँशु पुछेको छु । अनी धेरैलाई बाँच्ने प्रेरणा दिएको छु ।
यो अभियानमा निजी क्षेत्रले मात्रै केही गर्न सक्दैन सरकारको समेत ध्यान जानु जरुरी छ । एचआईभी संक्रमितहरूको लागि बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको खण्डमा धेरै सहज हुने थियो । जबसम्म मेरो जीवन रहन्छ तबसम्म म यही क्षेत्रमा वकालत गर्नेछु । एचआईभी संक्रमितहरूको पक्षमा काम गर्नेछु ।
प्रकाशित मितिः १८ मंसिर २०७६, बुधबार ०९:१५